Archive du 20170718
Guy Rivo Randrianarisoa “Efa mikorontana ny fanjakana”
Tsy mahagaga anay antoko Tiako I Madagasikara ny fialan’ny minisitry ny vola Gervais Rakotoarimanana ary efa tsikaritra hatry ny ela tamin’ny fifaneraseran’ny depiote tamin’ity minisitra ity fa tsy mifanaraka amin’ny soatoavina arahiny ny foto-kevitry ny fitondram-panjakana misy azy, hoy ny
Gervais Rakotoarimanana Tsy nanaiky natao fitaovana
Ofisialy ny fisintahan’ny minisitry ny vola sy ny tetibolam-panjakana Gérvais Rakotoarimanana ao anaty governemanta, araka ny fanambarana nataony teny amin’ny Hotely Carlton omaly tamin’ny 11 ora antoandro.
Tiako I Madagasikara Voarara ny hetsika manerana ny nosy ?
Tsy nekena ny didim-pitsarana nanome alalana ny Antoko TIM hankalaza ny faha-15 taonany teny Mahamasina ny 8 jolay lasa teo.
Depiote eny Tsimbazaza Mety hahazo 4x4 amin’izay ?
Nalaza ho lohalaharana tamin’ny fitsipahana ny fanomezana fiara tsy mataho-dalana ho an’ireo solombavambahoaka eny Tsimbazaza ny minisitry ny vola sy ny tetibola vao avy nametra-pialana, Gervais Rakotoarimanana.
Masoivohon’i Afrika Atsimo Nanadio sy nanavao ny Centre Fanambinana
Hankalazaina anio talata 18 jolay ny andron’i Nelson Mandela. Hanamarihana ny hetsika dia nanatanteraka asa sosialy teny amin’ny Centre Fanambinana,
Trafika sa atao sorona Nalaina ny tranon-jazan’ilay zazavavy kely 5 taona
Habibiana tsy nisy toy izany no nitranga tao Sirama Ambilobe ny sabotsy alina lasa teo. zazavavy kely iray vao dimy taona monja efa nampandrian-dReniny teo am-pandriana no nisy naka an-keriny sy nalana taova raha mbola lasa natsaka rano sy nandro ity farany.
Depiote Rasoanoromalala Marie Horace Manohy ny fidinana ifotony mamaha ny olan’ny mpamboly
Taorian'ny fidinana ifotony nataon'ny Dépiote Rasoanoromalala Marie Horace sy ny solotenan'ny mpamboly vary ao Avaratr'Ambohimanarina
Ity tokoa vao tonga amin’ilay fomba fiteny hoe “miandry fa gasy”.
Vola vaovao Hanatsara ny toekarena, hoy ny filoham-pirenena
Nanararaotra niteny mikasika ilay vola 20.000 ariary tokana nivoaka nanomboka omaly ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina,
Vola vaovao 20 000 Ariary Manahirana ny fampiasana azy
Nikirakira vola vaovao indray ny Malagasy nanomboka omaly. Nivoaka ary nampiasaina manerana ny Nosy nanomboka omaly mantsy ireo ravim-bola vaovao amin’ny endriny hafa toy ny 2.000 Ar, ny 5.000 Ar, ny 10.000 Ar ary ny 20.000 Ar mitambatra.
Bakalorea -Antananarivo Hivoaka ny 25 aogositra ny vokatra
Ho tanterahina ny 24 jolay ho avy izao manerana ny Nosy ny fanadinana bakalôrea taona 2017. Miisa 74. 577 ireo mpiadina rehetra hiatrika izany , ka 69.539 amin’ireo no ao amin’ny sokajy ankapobeny raha 5.038 kosa ny sokajy teknika.
Loza teny Fenoarivo Mpitondra « moto » maty voahitsaky ny « Camion »
Nisehoana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina teny Fenoarivo manakaiky ny toby fivarotan-tsolika Total omaly maraina.